Torolalana ho an'ny fahafantaran'ny lalàna momba ny fampiofanana ho an'ny ankizy
Ny Lalàna mifehy ny fampianarana fianarana amin'ny homeschooling
Ny mora indrindra - ary ny tena sarotra indrindra - Ireo Fianarana ho an'ny Fianakaviana
Ny sekolim-pikarakarana ara-pahasalamana dia ara-dalàna ao amin'ny firenena 50 manerana an'i Etazonia hatramin'ny 1993. Araka ny fikambanana Homeschool Legal Defense, dia tsy ara-dalàna ny fampianarana an-trano tany amin'ny ankamaroan'ny fanjakana vao haingana tamin'ny taona 1980 tany ho any. Tamin'ny 1989, firenena telo monja, Michigan, North Dakota, ary Iowa, dia mbola nihevitra fa ny famonoana olona ho toy ny famonoana olona.
Mahaliana fa ireo fanjakana telo ireo, roa amin'izy ireo, Michigan ary i Iowa, dia voatonona ho anisan'ireo firenena manana lalàna henjanken'ny lalàna indrindra.
Na dia ny lalàna momba ny homeschooling amin'izao fotoana izao aza dia manerana an'i Etazonia, ny fanjakana tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny famolavolana lalàna momba ny homeschool, izay midika fa ny zavatra tsy maintsy atao amin'ny legeschool ara-dalàna dia miova arakaraka ny toerana iainan'ny fianakaviana.
Ny fanjakana sasantsasany dia mifehy tsara, fa ny hafa kosa mametra ny fepetra vitsivitsy amin'ny fianakaviana homeschooling. Ny fikambanana miaro ny fiarovana ara-pananahana ao Homeschool dia mitazona tahiry maimaika amin'ny lalàna homeschooling ao anatin'ny firenena dimampolo.
Fepetra tokony ho fantatra rehefa heverina ny lalàna momba ny lalàna momba ny lalàna
Ho an'ireo izay vao manomboka fampianarana ny homeschooling dia mety tsy ho fantatra ny fepetra ampiasaina amin'ny lalàna homeschool. Ny sasany amin'ireo fepetra fototra tokony ho fantatrao dia ahitana:
Fanatrehana tsy maintsy atao : Izany dia miankina amin'ny sokajin-taonan'ny ankizy dia takiana amin'ny sehatry ny sekoly. Ao amin'ny ankamaroan'ny fanjakana izay mamaritra ny taona fanatrehana ny fanatrehana ny mpianatra ho an'ny ankizy, ny ankamaroan'ny isa dia eo anelanelan'ny 5 sy 7 taona. Ny ankamaroany dia eo anelanelan'ny 16 sy 18 taona.
Fanambarana (na Fampitandremana) momba ny fikasana : Fanjakana maro no mitaky fa ny fianakaviana homeschooling dia manolotra fampatsiahivana isan-taona amin'ny fikolokoloana ny sekoly ambaratonga faharoa ho an'ny mpitantana ny distrika na ny distrika. Ny votoatin'io fampitandremana io dia mety miovaova amin'ny fanjakana, fa matetika ny anarana sy ny sokajin'ny ankizy homeschooled, ny adiresin'ny trano, ary ny sonian'ny ray aman-dreny.
Fotoam-pampianarana : Ny ankamaroan'ny fitondram-panjakana dia manondro ny isan'ny ora sy / na isan'andro isan-taona mandritra ny fotoana tokony handraisan'ny ankizy ny fampianarana. Ny sasany, toa an'i Ohio, dia mampianatra 900 ora ny fampianarana isan-taona. Ny hafa, toa an'i Géorgie, dia manome ora efatra sy halavany isan'andro mandritra ny 180 andro isaky ny taom-pianarana.
Portfolio : Misy fanjakana manolotra safidy portfolio ho an'ny toeram-pitsaboana na fanombanana matihanina. Ny portfolio dia tahirin-drakitra misongadina ny fivoaran'ny mpianatra isaky ny taom-pianarana. Mety misy ny firaketana toy ny fanatrehana, ny mari-pahaizana, ny kilasy vita, ny karazana asa, ny sarin'ireo tetikasa, ary ny fanaovana test.
Fandaharam- potoana sy fizarana : Ny sahan-kevitra sy ny fizarana dia lisitr'ireo lohahevitra sy hevitra izay hianatra mandritra ny taom-pianarana. Ireo foto-kevitra ireo dia rava matetika amin'ny lohahevitra sy ny ambaratonga.
Fitsapana natokana : Maro ireo fanjakana mitaky ny fanadinana any an-tsekoly amin'ny homeschool amin'ny alàlan'ny fitsaboana. Ireo fitsapana mifanaraka amin'ny fepetra takin'ny fanjakana tsirairay dia mety miovaova.
Sekoly ambaratonga / fakan-tsarimihetsika : Manome safidy ho an'ny mpianatra homeschooled ny fanjakana sasany mba hisoratra anarana any amin'ny sekoly ambaratonga iray. Mety ho sekoly tsy miankina tsy miankina izany na fikambanana iray natsangana hanampiana ireo fianakaviana homeschooling mifanaraka amin'ireo lalàna ao amin'ny fanjakany.
Ampianarina amin'ny ray aman-dreniny ao an-trano ny mpianatra, saingy ny sekolim-piraketana dia mirakitra rakitsoratra ho an'ireo mpianatra voasoratra anarana. Ny firaketana takiana amin'ny sekolim-piraketana dia miovaova arakaraka ny lalàn'ny fanjakana misy azy ireo. Ireo antontan-taratasy ireo dia omen'ny ray aman-dreny ary mety ahitana ny fanatrehana, ny fitsapana, ary ny mari-pahaizana.
Ny sekoly ambaratonga sasantsasany dia manampy ny ray aman-dreny hisafidy ny fandaharam-pampianarana ary manolotra horonantsary, diplaoma ary fombafomba fianarana.
Mpikambana ao amin'ny lalàna manan-kery ankapobeny
Ireo firenena izay heverina ho tena mifehy ny fianakaviana homeschooling dia:
Matetika no raisina ho toy ny iray amin'ireo lalàna voaaro indrindra, ny lalàna homeschooling ao New York dia mitaky ny handehanan'ny ray aman-dreny fandaharam-pianarana isan-taona ho an'ny mpianatra tsirairay. Ity drafitra ity dia tsy maintsy ahitana fampahalalana toy ny anarana, ny taona, ary ny ambaran'ny mpianatra; ny fandaharam-pampianarana na boky fianarana tianao hampiasaina; ary ny anaran'ny ray aman-dreny mampianatra.
Ny fitondram-panjakana dia mitaky fizahan-taratra isan-taona izay tokony hananan'ny mpianatra na eo amin'ny 33% isan-jato na hampivoatra ny fanatsarana ny ambaratongan'ny taona avy amin'ny taona teo aloha. Ny New York ihany koa dia mitanisa lohahevitra manokana izay ampianarin'ny ray aman-dreny ny zanany amin'ny ambaratonga samihafa.
Pennsylvanie, fanjakana iray hafa mifehy, dia manome safidy telo ho an'ny homeschooling. Eo amin'ny lalàna momba ny homeschool, ny ray aman-dreny rehetra dia tsy maintsy mametraka fanambarana notendrena ho an'ny homeschool. Ity endrika ity dia ahitana ny fampahalalana mikasika ny vaksiny sy ny firaketana ara-pitsaboana, miaraka amin'ny fanamarinana ny heloka bevava.
Ny ray aman-dreny homeschooling, Malena H., monina ao Pennsylvanie, dia milaza fa na dia "... dia raisina ho iray amin'ireo fanjakana manana fitsipika ambony indrindra ny fanjakana ... tsy dia hoe ratsy izany. Tena mahavariana izany rehefa mandre ny fepetra takina rehetra ianao, fa rehefa vitanao izany indray mandeha dia mora. "
Hoy izy: "Amin'ny fizarana fahatelo, fahadimy sy fahavalo, ny mpianatra dia tokony hanao fitsapam-pifehezana. Misy karazany misafidy, ary afaka manao azy ireo any an-trano na an-tserasera. Tsy maintsy mitazona portfolio ho an'ny ankizy tsirairay izay manana santionany vitsivitsy amin'ny lohahevitra nampianarina sy ny vokatry ny fitsapana nomerika raha toa ka ao anatin'ny iray taona ny fitsapana. Amin'ny fiafaran'ny taona dia mahita mpandinika ianao hamerina hijery ny portfolio ary hanasonia izany. Avy eo dia alefaso any amin'ny distrikan'ny sekoly ny tatitra fanamarinana. "
Ireo Lalàna mifehy ny Lalàna momba ny fandaharam-pianarana
Raha ny ankamaroan'ny fanjakana dia mitaky fa ny ray aman-dreny mpampianatra dia manana diplaoma ambony amin'ny ambaratonga ambony na GED, ny sasany, toa an'i Dakota Dakota, dia mitaky fa ny mpampianatra dia manana fari-pahaizana mampianatra na manara-maso roa taona farafahakeliny amin'ny mpampianatra iray manana mari-pahaizana.
Izany dia mametraka an'i Dakota Avaratra amin'ny lisitr'ireo izay heverina ho meren-keloka amin'ny fomba mahazatra amin'ny lalàna momba ny homeschool. Anisan'izany ireo:
Ny Carolina any North Carolina dia heverina ho toe-javatra sarotra ho an'ny homeschool. Ilaina ny mitazona firaketana sy firaketana fisorohana ho an'ny ankizy tsirairay. Carolina Atsimo dia mitaky ihany koa fa ny ankizy dia mamaritra fitsapam-pirenena amin'ny ankapobeny isan-taona.
Ny firenena hafa manana fepetra miadidy izay mitaky fizahan-taratra isan-taona dia ahitana an'i Maine, Florida, Minnesota, New Hampshire, Ohio, South Carolina, Virginia, Washington, ary West Virginia. (Ny sasany amin'ireny fanjakana ireny dia manolotra safidy safidy homeschooling izay tsy mitaky fisedrana isan-taona.)
Maro ny fanjakana manolotra safidy mihoatra ny safidy iray ho an'ny homeschool. Tennessee, ohatra, dia manana safidy dimy amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny safidy telo ety ivelany sy ny fianarana lavitra (kilasy an-tserasera).
Heather S., ray aman-dreny homeschooling avy any Ohio , dia milaza fa ny homeschoolers any Ohio dia tsy maintsy manolotra tatitra isan-taonany isan-taona ary famintinana ny fandaharam-pianarana natao azy ireo, ary manaiky ny hanatanterahana ny fampianarana 900 ora isan-taona. Avy eo, amin'ny fiafaran'ny taona, ny fianakaviana ".... Afaka manao fanandramana avy amin'ny fanjakana na manana porofo mivaingana ary mametraka ny valiny ..."
Ny ankizy dia tsy maintsy manandrana mihoatra ny 25% isan-jato amin'ny fanandramana amin'ny fanandramana na fampisehoana any amin'ny portfolio.
Virgin homeschooling an'ny viriosy, Joesette, dia mihevitra fa mora ny manaraka ny lalàna momba ny homeschooling. Milaza izy fa ny ray aman-dreny dia tsy maintsy "mandahatra ny fampandrenesana isan-taona ny 15 Aogositra, avy eo dia manome zavatra hanehoana fandrosoana amin'ny faran'ny taona (amin'ny 1 aogositra). Izany dia mety ho fitsapana voaomana, mameno farafaharatsiny ao amin'ny 4e stanine, portfolio [mpianatra] ... na taratasy fanamarinana ataon'ny mpandinika iray nankatoavina. "
Amin'ny ankapobeny, ireo ray aman-dreny ao Virgine dia afaka mametraka fanavotana ara-pinoana.
Ireo Lalàna misy lalàna momba ny fandinihan-tena amin'ny ankapobeny
Firenena 16 any Etazonia no heverina ho tsy misy dikany. Anisan'izany ireto:
Ny Georgia dia mitaky fanambarana fanao isan-taona alohan'ny handefasana ny 1 Septambra isan-taona, na ao anatin'ny 30 andro amin'ny daty hanombohan'ny fianarana homeschooling. Ny ankizy dia tsy maintsy maka fitsapana ara-pitsipi-pirenena iray isaky ny telo taona manomboka amin'ny taom-piofanana fahatelo. Ny ray aman-dreny dia takiana hanoratra tatitra momba ny fandrosoana isan-taona ho an'ny mpianatra tsirairay. Ny fitiliana sy ny tatitra momba ny fandrosoana dia tokony hotehirizina ao anaty rakitra saingy tsy voatery halefa amin'ny olona.
Na dia ao anatin'ny lisitra tsy dia misy dikany loatra aza i Nevada, dia milaza i Magdalena A., izay miahy ny zanany ao amin'ny fanjakana fa ", paradisa homeschooling. Ny lalàna ihany no mamaritra fitsipika tokana: rehefa miverina fito ny zaza iray ... tokony halefa ny filazana ny fikasana hianatra any an-trano. Izany dia ho an'ny ambiny amin'io ain'ny ankizy io. Tsy misy portfolios. Tsy misy fanamarinana. Tsy misy fitsapana. "
Amelia H. homeschooling, Amelia H. dia manasongadina ny safidy homeschooling an'ny fanjakana. "(1) Ny safidin'ny fianarana any amin'ny distrika. Ny fitaovana dia omena ary takiana isam-bolana na isam-bolana. Ny distrika sasany dia manome kilasy ho an'ny ankizy mianatra any an-tokantrano ary / na mamela ny ankizy haka kilasy sasany ao amin'ny toeram-ponenana.
(2) Sekoly Charter. Samy hafa izy ireo fa samy miahy ny homeschoolers ary manome fanampiana amin'ny fandaharam-pianarana tsy ara-potoana sy amin'ny asa ivelan'ny fianarana amin'ny alalan'ny programa mpivarotra ... Ny sasany dia mitaky fa ny ankizy dia manaraka ny fenitry ny fanjakana; Ny hafa dia mangataka fotsiny hoe mariky ny 'fitomboana mavesa-danja.' Ny ankamaroany dia mitaky ny fanandramana ataon'ny fanjakana saingy ny vitsy an'isa dia ahafahan'ny ray aman-dreny mamorona portfolio ho fanombanana ny taona.
3) Fahaizana amin'ny fianarana mahaleo tena. Ny ray aman-dreny dia tokony hilaza ny tanjon'ny fandaharam-potoana amin'ny fanombohan'ny taom-pianarana ... Ny famerenana diploma avo lenta amin'ny alalan'ity làlana ity dia mamitaka ary maro ny ray aman-dreny misafidy ny mandoa vola amin'ny fanampiana amin'ny taratasy. "
Mpikambana ao amin'ny Lalàna momba ny Fianakaviana vonjimaika
Farany, ny fanjakana iraika ambin'ny folo dia heverina ho toy ny homeschool amin'ny ankapobeny misy fameperana vitsy amin'ireo fianakaviana homeschooling. Ireo fanjakana ireo dia:
Texas dia malaza amin'ny homeschool-tena miaraka amin'ny feo homeschool mahery ao amin'ny ambaratonga maha-mpanao lalàna. Iowa ray aman-dreny homeschooling, Nichole D. dia nilaza fa mora foana ny fanjakany. "[Ao Iowa], tsy manana fitsipika isika. Tsy misy fizahan-tany, tsy misy drafitr'asa takiana, tsy misy antontam-panatrehana, na inona na inona. Tsy voatery hampahafantarina ny distrika fa isika no homeschooling. "
Hoy i Bethany W., ray aman-dreny: "Tena malemy fanahy i Missouri. Tsy misy distrika velively na olona iray raha tsy efa nampianarina tany aloha ny zanakao, tsy misy fitsapana na fanombanana mandrakizay. Ny ray aman-dreny dia mitazona ora iray (ora 1.000, 180 andro), tatitra an-tsoratra momba ny fandrosoana, ary ny sasany amin'ireo karazan'asa [an'ny mpianatra]. "
Miaraka amin'ny tranga vitsy monja, ny fahasarotana na ny fahafaham-po amin'ny fanarahana ny lalàna homeschooling an'ny fanjakana tsirairay dia mety. Na dia ao amin'ny fanjakana izay heverina ho tena mifehy aza, ray aman-dreny homeschooling matetika dia milaza fa tsy sarotra toy ny hita amin'ny taratasy ny fanarahan-dalàna.
Na heverinao ho maneritery na mandefitra ny lalàna momba ny homeschooling misy anao, dia ilaina ny manome antoka fa takatrao ny zavatra takiana aminao mba hanefena azy. Ity lahatsoratra ity dia tokony ho raisina ho fitsipika tokana. Ho an'ny lalàna voafaritra manokana, ho an'ny fanjakana, azafady, jereo ny tranonkalan'ny mpanohana ny homeschool na ny fikambanana Homeschool Legal Defense.
Ahoana no hanombohana ny fianarana any an-trano any Caroline Avaratra
Ny Sekoly Alahady (Home)
Ny fomba hankalazana ny andron'ny Valentines ho fianakaviana fianakaviana homeschool
Hafiriana no tokony hianarako?
8 Fizarana asa fanontana ho an'ny andron'i Martin Luther King
Fikarakarana firaketana an-tsoratra Homeschool
Free or Cheap Movie Movies ho an'ny ankizy
Nahoana no Marary Foana ny Malemyita?
Inona no atao hoe archetype?
Ny fitsipiky ny lisansa
Fampiofanana Bodybuilding Splits - Fomba fambolena bodyguilding amin'ny fomba hanaparitahana ny fampiofanana
Inona no atao hoe mivezivezy malalaka?
Ireo Emperora Romana dimy tsy tokony hanasa anao hisakafo
Ny fitarainan'i Edvard Munch
Anne Hathaway - Ny vadin'i William Shakespeare
Fahitana sy hallucinations
Ny Colleges Claremont
Inona no mofomamy amin'ny tartar na potassium bitartrate?
Mampiasà tabilao Capo mba hahatonga ny fitendry gitara kokoa
Ny fiteny pasifika amin'ny teny alemà
Mankao ny kintan'i Vulcan
10 Jazz trompet Essential Jazz
Fomba 6 hanampiana ireo mpianatra hitady vaovao diso
Ny maha-zava-dehibe ny Ordeal ao amin'ny diabe mahery
Fantaro ireo famitahana tsotra ho an'ny "Sourire" (hitsiky)
Ahoana ny fomba hiarahana amin'ny mpiara-mianatra tsy tapaka sy mahafa-po ary mahomby?
Hira latinina malaza momba ny fifindra-monina
Soso-kevitra mba hanandrana mipetaka tsara
Ny mekanisma afovoany amin'ny toerana misy ny volley ball
Fampitahana ny ACT Score for Universities Top